आजको राशिफल ! यी राशिहरूले आज खुशीको खबर सुन्न पाउने - नेपाल कुरा
आजको राशिफल ! यी राशिहरूले आज खुशीको खबर सुन्न पाउने
प्रकाशित मिति: २२ चैत्र २०७७, आईतवार April 4, 2021 , संवाददाता: Yukta
धेरैतिरबाट नयाँ कामको अफर आउनेछ । मनमा उमंग छाउनेछ । आर्थिक पक्ष सबल रहने छ । पारिवारिक सद्भाव रहनेछ । पिता र दाजुभाइसँगको सम्बन्धन सुधार हुँदै जानेछ । खुशीको खबर सुन्न पाइनेछ । सन्तान सुख मिल्नेछ । विशिष्ठ व्यक्तिसँग भेट हुनाले मन प्रसन्न हुनेछ ।
धार्मिक क्षेत्रमा मन जानेछ । दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ। नयाँ ज्ञान प्राप्त हुने योग छ । आर्थिक लाभ प्राप्त होला । रोकिएको काम बन्नसक्छ । विशेष अवसर प्राप्त हुनाले मन प्रफुल्लित हुनेछ। टाढिएका साथीभाइ नजिकिनाले हर्ष बढ्नेछ । खुशीको खबर सुन्न पाइनेछ ।
आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन सकिएला । दाम, नाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ । विशेष काममा जग बसाउने अवसर जुट्नेछ। प्रतिष्ठित जिम्मेवारी हात पार्न सफल भइनेछ । विशिष्ट व्यक्ति भेट्ने अवसर जुट्नेछ । आफूभन्दा वरिष्ठ व्यक्तित्वको साथ सहयोग मिल्नेछ । आर्थिक कारोबारमा मन्दी आउन सक्छ ।
आकस्मिक धन लाभ हुन सक्नेछ । बैदशिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । नयाँ काम र जिम्मेवारी हात पार्ने मौका छ । पढाइमा राम्रै प्रगति हुनेछ । आफन्तसँग पुनर्मिलनको योग छ । आफ्ना योजना गोप्य राखेर गरेको काममा सफलता मिल्ला । खुशीको खबर सुन्न पाइनेछ ।
मानसम्मानको योग छ । सामाजिक ख्याति बढ्नेछ । अध्ययनका लागि भ्रमणको मौका जुट्न सक्छ । व्यापारमा सामान्य फाइदा भए पनि पशुपालन र कृषि क्षेत्रबाट राम्रो लाभ हुनेछ । रोकिएका काम बन्नाले नयाँ कामतर्फ अग्रसर भइनेछ। बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा सफलता हात पर्ला । छातीसम्बन्धी समस्या देखिन सक्छ । ज्योतिषी एस्ट्रो राज
के हो “पेनोरिज” रोग ? जसले यौन क्षमता पूर्णरुपमा खतम पार्छ !
यौन सम्बन्ध सुरु गरिसकेपछि पुरुषमाभन्दा महिलामा यस्ता परिवर्तनहरु देखिन थाल्छ